Tady tsy misy tanana | Tontolo alika
Encarni Arcoya | | Fitaovana alika
Alao an-tsaina hoe tsy maintsy mandeha alika mandeha ianao. Saingy lehibe ity iray ity, ary matahotra ianao ny ratra ateraky ny tananao raha tsy maintsy misintona rojo isaky ny roa ianao, na hampihemotra na hampandehanana azy. Tsy mieritreritra ve ianao fa amin'ireny tranga ireny dia hahazo aina kokoa izy io tady tsy misy tanana?
Ity karazana fitaovana ity dia mahazatra amin'ny fanatanjahan-tena, toy ny canicross, fa ny marina dia azo ampiasaina isan'andro. Ankehitriny, inona no fehy tsy misy tanana tsara indrindra eny an-tsena? Inona no tokony hoheverinao rehefa mividy azy io? Ahoana ny fampiasana azy? Hovaliana eto ambany daholo ireo fanontaniana ireo.
1 Ny tadiny tsy misy tanana
2 Inona no atao hoe tady tsy tanana
3 Canicross, ny fanatanjahantena izay manao lamaody ny fehy tsy misy tanana
4 Ahoana ny fomba hisafidianana tsara ny tady tsy misy tanana
4.1 Haben'ny alika
4.3 Fanampiny fanampiny
4.4 Ireo singa misaintsaina
5 Fomba fampiasana fehy tsy misy tanana
6 Aiza no hividianana kofehy hihazakazaka miaraka amin'ny alika
Ny tadiny tsy misy tanana
Tady PHILORN ho an'ny ...
Dog Leash Hands ...
Manenjika fehikibo ...
Inona no atao hoe tady tsy tanana
Azontsika atao ny mamaritra ny boky tanan'ny tady a fehikibo izay apetraka manodidina ny andilana ary avy eo dia mivoaka fehikibo izay mihantona amin'ny alikaNa amin'ny volonao na amin'ny vozon'akanjo.
Amin'izany fomba izany dia mitazona antsika ilay biby fa, miaraka amin'izay, mamela antsika roa ho afaka. Raha misintona ilay biby dia azontsika atao ny manakana azy amin'ny alàlan'ny faneriterena amin'ny vatana iray manontolo, ary tsy amin'ny tanana na amin'ny tanana ihany, amin'ny fisorohana aretina ao amin'ny hato-tanana izay, amin'ny fotoana maharitra, dia mety ho tena manimba.
Ny ankamaroan'ireo fehin-kibo ireo dia azo ovaina, amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny andilan'ny olona. Izy ireo koa dia be mpampiasa amin'ny fanatanjahan-tena ho fitaovana ilaina amin'ny fampiharana, ankoatry ny hafa, canicross, ny fanatanjahantena lamaody.
Canicross, ny fanatanjahantena izay manao lamaody ny fehy tsy misy tanana
Canicross dia fanatanjahan-tena izay mahazo mpanaraka maro hatrany amin'ny alàlan'ny fanatanterahana fahazarana miaraka amin'ny biby fiompinao. Izany no izy samy mihazakazaka miaraka ny alika sy ny tompony, mifandanjalanja, ary mifanampy.
Ho an'izany dia misy tadiny tsy misy tanana miaraka amina fehikibo canicross sy tady elastika izay ahafahan'ny alika miraikitra amin'ny tompony ary samy afaka mihazakazaka malalaka kokoa. Amin'ny lafiny iray, ny olona dia mahazo tombony amin'ny tanjaka ananan'ny alika amin'ny alàlan'ny fanerena azy ireo hanaraka ny gadon'izy ireo. Etsy ankilany, ny alika dia manao fanazaran-tena amin'ny alàlan'ny fisintomana ny olombelona, ​​miaraka amin'izay dia mametraka fifamatorana amin'ny tompony izy.
Tsy ilaina ny mieritreritra fanazaran-tena matihanina na matanjaka be, fa mety ho fandehandehanana isan'andro ihany koa na handehandeha miaraka amin'ny alikao, ka mizara fotoana iray izay tsy maintsy hahatongavan'ny alika sy ny tompony iray.
Ahoana ny fomba hisafidianana tsara ny tady tsy misy tanana
Ankehitriny rehefa manana hevitra momba ny tadin-tanana tsy tanana ianao dia mety ho hitanao ny vahaolana ao. Na te handeha hitsangatsangana fotsiny ianao miaraka amin'ny alikanao mitazona malalaka ny tananao hanao zavatra hafa amin'izy ireo; Na te hampihatra canicross ianao na fanatanjahan-tena hafa, ity singa ity angamba no tadiavinao.
Ankehitriny, tsy tsotra toy ny mandeha any amin'ny magazay izany ary mividy ilay voalohany hitanao. Ilaina ny maka izany lafin-javatra maro izay hahatonga anao hisafidy modely iray na hafa.
Ny tadim-tanana tsy misy tanana dia tsy mitovy amin'ny alika goavambe goavambe toy ny amin'ny kilalao. Tsy ny refin'ny biby tsirairay ihany, fa ny hery azon'izy ireo ampiasaina koa. Noho io antony io, rehefa misafidy iray ianao dia tsy maintsy tadidinao ny karazana alika tadiavinao, indrindra satria, amin'ity tranga ity, ilay tsy maintsy arovana amin'ny ratra dia ianao.
Teboka iray hafa tokony horaisina koa ny "fahalalahana" izay homena ny alikanao. Izany hoe, raha avelanao hisaraka be aminao izy na tsia. Avela eo anelanelan'ny iray metatra sy roa metatra ny elanelana misy azy ireo, saingy tsy misy intsony.
Tady tsy misy tanana no mieritreritra ny zava-drehetra. Ary, rehefa mivoaka isika, dia mila mitondra zavatra sasany, toy ny lakile, finday na vola malalaka. Saingy, raha tsy manana paosy ianao dia tsy maintsy mitondra ny zava-drehetra eny an-tananao.
Noho izany dia misy maodely avo roa heny toy ny fonosana fanny hahafahanao mametraka singa vitsivitsy. Tena voafetra ny habaka, fa hanome anao hitondra izay mahitsy sy ilaina.
Ireo singa misaintsaina
Raha te hihazakazaka ianao na mandeha an-tongotra amin'ny alina dia zava-dehibe ny fehin-tànana tsy misy tanana manana taratra taratra mba hahafantaran'ny olona fa manodidina anao sy mahita anao ianao.
Fomba fampiasana fehy tsy misy tanana
Mieritreritra ny hividy tadidy tsy misy tanana? Fantatrao fa mora be ny mampiasa azy. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana peratra misokatra mba hahafahanao mametraka ny tadiny manodidina ny andilanao ary manidy azy. Ianao dia tokony arovy mba tsy hisokatra, ary koa mba mifatotra tsara amin'ny andilana (raha azo atao tsy misy ketrona amin'ny akanjo na mitovy amin'izany, rehefa mampiasa azy dia mety hahasosotra).
Raha vantany vao amboarinao ny tadiny, mila miditra fotsiny amin'ny rojo ianao na ny tadiny elastika amin'ny alikao (eo amin'ny fatorany na ny fehikibo) ary ianao dia ho vonona hivoaka miaraka amin'ny alikanao nefa tsy mila mitondra ny fehy eny an-tananao.
Aiza no hividianana kofehy hihazakazaka miaraka amin'ny alika
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa momba ny fampiasana ny leash hihazakazahana miaraka amin'ny alika, tonga ny fotoana hisafidianana iray amin'ireo maodely marobe hitanao eny an-tsena.
Aza adino ity azafady Tsy hanompo anao fotsiny ny fanaovana canicross na fampihetseham-batana mitovy amin'izany, fa mety ho fitaovana hampiala azy io handeha an-tongotra isan'andro koa ary araraoty fa afaka ny tananao (ary arovana amin'ny jerky).
Amazon: Izy io dia iray amin'ireo fivarotana lehibe indrindra ary alehanao mahita fitaovana fanatanjahan-tena ho an'ny alika samy hafa marika sy vidiny. Raha ny mahazatra, ireo tadin-tanana tsy misy tanana ireo dia hanolotra azy ireo hampiasa vatana fa tsy midika akory izany hoe tsy azonao ampiasaina amin'ny fampiasana hafa.
kiwiko: Kiwoko dia fivarotana manokana amin'ny biby. Ao anatin'izany no anananao maodely sasany an'ny leashes tsy misy tanana ho an'ny alika, fa tena voafetra izany. Raha ny marina dia maro no amidy amin'ny alika canicross.
Decathlon: Ity safidy ity angamba no tsara indrindra hahitana modely manokana ho an'ity fanatanjahantena ity, na koa amin'ny fampiasana isan'andro. Na dia tsy dia misafidy firy aza izy ireo, dia tsy misy ny fanontaniana fa ny tadin'ny tanana tsy misy tanana, ary koa ny kofehin-tànana kanika sy kojakoja hafa dia manana kalitao tsara tarehy ary maro no manoro hevitra azy ireo.
Sahy manandrana kofehy tsy misy tanana amin'ny diabe isan'andro ve ianao sa misoratra anarana hampihetsi-po amin'ny alikao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Tady tsy misy tanana